मृत्युपछि के हुन्छ? कोमाबाट निस्किएका न्युरो सर्जनको अनुभव - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ मृत्युपछि के हुन्छ? कोमाबाट निस्किएका न्युरो सर्जनको अनुभव
मृत्युपछि के हुन्छ? कोमाबाट निस्किएका न्युरो सर्जनको अनुभव
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७८ चैत्र १ गते, १५:३९ मा प्रकाशित
के मृत्युपछि कुनै जीवन छ? शरीर मर्दा आत्मालाई के हुन्छ ? यस्ता प्रश्नले सयौं वर्षदेखि मानिसलाई सताउँदै आएका छन् र यसबारे विज्ञहरुको विभिन्न दाबी पनि आएका छन्।
हालै एक न्यूरोसर्जनले मृत्युपछि जीवन हुने दावी गरेका छन् । उक्त कुरा आफै भोगेको उनी बताउँछन् । मस्तिष्कमा गम्भीर संक्रमण भएपछि न्यूरो सर्जन कोमामा गएका थिए । यस अवधिमा उनको चेतनाले अलौकिक संसार (नियर डेथ एक्सपिरियन्स) मा जे देखे त्यसलाई आफ्नो पुस्तकमा वर्णन गरेका छन् ।
द सनको रिपोर्ट अनुसार ६८ वर्षीय डा. इबेन अलेक्जेन्डर एक परिचित न्यूरो सर्जन हुन् । आफ्नो २५ वर्षको सफल करियरमा उनले न्युरो सर्जरी गरेर सयौं मानिसलाई नयाँ जीवन दिएका छन् । तर, एक समय यस्तो पनि आयो, जब उनी आफैँ मस्तिष्कसम्बन्धी रोगबाट गम्भीर बिरामी भएर। उनी मृत्युको मुखमै पुगेर बाँच्न सफल बने ।
रिपोर्टका अनुसार नोभेम्बर १०, २००८ मा जब डा. अलेक्जेन्ड उठे, उनले आफ्नो शरीरमा गम्भीर पीडा महशुस गरे। श्रीमती चिया दिन आउँदा उनले शरीर दुखेको र आराम गर्ने बताए । चिया दिएपछि श्रीमती गइन्, त्यसपछि उनी फेरि सुते । केही घन्टापछि उनी फर्किदा श्रीमान् सुतेको र आँखा शरीरमा डुबेको देखेकी थिइन् ।
मस्तिष्कमा भाइरस संक्रमण
उनको अवस्था देखेर श्रीमती त्रसित भइन् र तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएर उनलाई लिन्चबर्ग जनरल अस्पताल लगिन् । यो त्यही अस्पताल हो जहाँ अलेक्ज्याण्डर विगत केही वर्षदेखि न्यूरोसर्जनको रूपमा कार्यरत थिए। डाक्टरहरूले उनको चेकअप गर्दा केही समयमै उनको मस्तिष्कमा दुर्लभ प्रकारको ब्याक्टेरियाको संक्रमण ई. कोलाई मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस भएको पत्ता लाग्यो। केही घन्टामै यो भाइरसले उनको मस्तिष्क चर्काउन थाल्यो ।
उनको अवस्था बिग्रँदै गएको देखेर डाक्टरहरुले उनलाई तत्काल भेन्टिलेटरमा भर्ना गरे जहाँ उनी गहिरो कोमामा गएका थिए ।डाक्टरहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई अलेक्जेन्डरसँग केही घण्टा मात्र बाँकी रहेको बताए। तिनीसँग बाँच्ने सम्भावना १० प्रतिशत मात्र छ। बाँचे भने पनि जीवनभरको लागि अपाङ्ग हुनेछन् र अरूको सहयोगमा सधैंभरि बाँच्न बाध्य हुनेछन् ।
यद्यपि, यी डाक्टरहरूको सल्लाह पछि, अलेक्जेन्डर अर्को संसारमा थिए। उनले कोमामा परेपछि पुनर्जन्मको अनुभव गरेको भोगाई बारे आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । पुस्तकका अनुसार शरीरमाथिको पकड गति कम भयो र आत्मा त्यसबाट मुक्त भयो। जब उनी बाहिर निस्किए, उनले महसुस गरे कि उनी अँध्यारो तहखानेमा फसेका थिए र केहि देख्न सक्दैन थिए । बोल्न चाहन्थे तर बोल्न सकेनन् । एकै समयमा, उसको आत्माले एउटा गेट पार गर्यो र ठूलो उज्यालो गोलातर्फ लाग्यो। घेरा उज्यालोले भरिएको थियो र त्यहाँ मधुर संगीत बजिरहेको थियो। बीचबाट अचानक प्रकाशको ज्योति खुल्यो, त्यसपछि उनलाई हरियो भूमिमा लगियो।
त्यहाँ गहिरो अन्धकारमा प्रकाशको किरण देखिन्थ्यो, जुन यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता थियो। अलेक्जेन्डर एक हप्तासम्म गहिरो कोमामा रहे र यस क्रममा उनले त्यो प्रकाश किरण मात्र देखे । त्यस क्रममा उनले ५ वटा दिव्य अनुहार देखे । तीमध्ये ४ वटा अनुहार परिचित देखिन्थे। त्यहाँ एक अपरिचित अनुहार थियो। अचानक उनको आँखा खुल्यो र उनी आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्किए।
उनी कोमाबाट फर्किएको देखेर डाक्टरहरु पनि छक्क परे । केही महिनाको उपचारपछि उनी पूर्णतया फिट भए र त्यसपछि उनी सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् ।
यसबाहेक अलेक्जेन्डरले मृत्युपछिको जीवनलाई नजिकबाट देखेको बताउँछन्। जसकारण उनको जीवन पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ ।